Rumaynta Eebbe, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Rumaysadka Ilaahay waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, oo ku xidhnaa wiilkiisii ​​uurjiifka ahaa oo lagu iftiimiyey eraygiisa weligiis ah iyada oo loo marayo marag ka ahaanta Ruuxa Quduuska ah oo ku jirta Qorniinka. Rumaynta Ilaah ayaa ka dhigaysa qalbiga iyo maskaxda dadka inay aqbalaan hadiyadda Ilaahay ee nimcada, badbaadada. Iimaanka xagga Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah, rumaysadku wuxuu awood inoo siinayaa inaynu noqonno mid bulsho ahaaneed oo aamin u ah Ilaaha Aabbeheen ah. Ciise Masiix waa aasaasaha iyo fuliyaha iimaankeenna, iyo xagga iimaanka, ee ma ahan shaqooyinka, waxaan ku gaarnaa badbaadada mahad leh nimcada. (Efesos 2,8; Falimaha Rasuullada 15,9; 14,27; Rooma 12,3; Yooxanaa 1,1.4; Falimaha 3,16; Rooma 10,17; Cibraaniyada 11,1; Rooma 5,1-2; 1,17) ; 3,21-28; 11,6; Efesos 3,12; 1 Korintos 2,5; Cibraaniyada 12,2)
Jawaabta Ilaahay iimaanka
Ilaah waa weyn yahay oo waa wanaagsan yahay. Ilaah wuxuu adeegsadaa xooggiisa xoogga badan si uu u ballaariyo ballanqaadkiisa jacaylka iyo naxariis ee dadkiisa. Isagu waa qabownimo, jacayl, xanaaq badan, nimcona hodan buu ku yahay.
Taasi waa wax fiican, laakiin sidee ayay noo quseysaa? Waa maxay isbeddelka ay nolosheenna ku samaynaysaa? Sideen uga jawaabnaa Ilaahey xoog iyo qabow labadaba? Waxaan uga jawaabnaa ugu yaraan laba siyaabood.
Haddii aan garwaaqsanno in Eebbe leeyahay dhammaan awoodda uu u yeesho wax alla wuxuu doonayo oo uu had iyo goor u adeegsado awooddaas inuu barakeeyo aadanaha, markaa waxaan ku kalsoonaan karnaa in aan ku jirno gacmo wanaagsan. Wuxuu leeyahay karti iyo ujeedo la qeexay inuu u shaqeeyo badbaadadeenna wax walba, ooy kujiraan kacdoonkeena, nacaybkayaga, iyo khayaanadayada aan ka geesno isaga iyo midka kaleba. Isagu waa gebi ahaanba aaminaadda - wuuna mudan yahay aaminkaaga.
Markaynu dhex joogno jirrabaadda, jirrooyinka, silica, iyo xitaa dhimashadaba, waxaynu ku kalsoonaan karnaa in Ilaah weli inala jiro, inuu ina daneeyo oo uu wax walba gacanta ku hayo. Waxaa laga yaabaa inaysan sidan u ekaan, oo runti waxaan dareemeynaa xakameyn, laakiin waxaan ku kalsoonaan karnaa in Ilaah uusan la yaabi doonin. Wuxuu u rogi karaa xaalad kasta, qaab kasta oo wax u dhimaya wanaaggeenna.
Marna uma baahnid inaan shaki ka qabno jacaylka Eebbe noo qabo. "Laakiin Ilaah wuxuu muujiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn" (Rooma 5,8). "Tani waa sida aan ku aqoonsanay jacaylka uu Ciise Masiix naftiisa u bixiyay annaga" (1 Yooxanaa 3,16). Waxaan ku kalsoonaan karnaa Ilaaha aan xitaa u tudhin wiilkiisa inuu na siiyo wax walba oo aan ugu baahanahay farxad weligeed ah oo uu ku helo wiilkiisa.
Ilaah cid kale uma dirin: Wiilka Ilaah, oo muhiim u ah Godhead-ga, ayaa noqday nin, si uu isagu innaga dhinto oo uu mar kale uga soo sara kaco kuwii dhintay (Cibraaniyada 2,14). Waxaa laydinka furtay dhiiggii xoolaha, mana aha dhiigga nin wanaagsan, laakiinse waxaynu leennahay dhiigga Ilaah oo noqday ninka. Markasta oo aan qaadno karaamada, waxaa nala soo xusuusiyaa heerka jacaylkiisa uu noo qabo. Waxaan ku kalsoonaan karnaa inuu isagu na jecel yahay. Isaga
waxay kasbatay kalsoonidayada.
Bawlos wuxuu yidhi, "Ilaah waa aamin, kan kuu oggolaan maayo inaad isku daydid xooggaaga, laakiin tijaabada joojiya si aad u adkaysato" (1 Korintos 10,13). Laakiin Rabbigu waa aamin; way ku xoojin doontaa oo waxay kaa ilaalin doontaa shar » (2 Tesaloniika 3,3). Xitaa haddii "aan aamin lahayn, isagu waa aamin" (2 Timoteyos 2,13). Isagu ma beddeli doono fikirkiisa ku saabsan inuu na doonayo, na soo wacayo, inuu noo roonaado. Aynu ku adkaysanno qirashada rajo ee ma lihin; maxaa yeelay isagu waa aamin aamin ah (Cibraaniyada 10,23).
Isagu wuxuu leeyahay ballanqaad, oo ah axdi inuu ina soo furto, oo uu na siiyo nolosha weligeed ah, inuu weligiis inaga jeclaado. Isagu ma doonayo inuu innaga la'aan noqdo. Isagu waa aamin, laakiin sidee ayaynu ugu jawaabnaa isaga? Ma welwel baa? Miyaan u halgamaa inaan ku mutaysanno jacaylkiisa? Mise annagaa ku aaminay?
Marna uma baahnid inaan shaki galno awoodda Eebbe. Tan waxaa lagu muujiyey sarakicidda Ciise kuwii dhintay. Kaasi waa Ilaaha xoogga leh xagga dhimashada laftiisa, oo leh amar kasta oo uu isagu abuuray, oo isagu xoogga oo dhan ka sarreeya oo dhan (Kolosay 2,15). Wax walba iskutallaab buu kaga adkaaday, oo tan waxaa loo caddeeyey sarakiciddiisa. Dhimashadu ma hor istaagi karto maxaa yeelay isagu waa amiirka nolosha (Falimaha Rasuullada 3,15).
Awood isku mid ah oo Ciise ka sara kiciyey kuwii dhintay wuxuu sidoo kale na siinayaa nolosha aan dhiman (Rooma 8,11). Waxaan ku kalsoonaan karnaa inuu isagu leeyahay awood iyo rabitaan uu ku fuliyo ballanqaadyadiisa oo dhan oo annaga naloo sameeyo. Waxaan ku aamini karnaa wax walba - taasna waa wax fiican maxaa yeelay waa nacasnimo in la aamino wax kale.
Waxaan ku guuleysan doonnaa keli ahaanteenna. Iskeed, xitaa qorraxdu way madoobi doontaa. Rajada kaliya ayaa ku jirta Eebbe ka awood badan kan qorraxda, oo ka awood badan kan caalamka, kaasoo aaminka badan waqtiga iyo goobta, oo jacaylka iyo aaminka inaga buuxo. Waxaan rajo ku qabnaa Ciise Badbaadiyeheenna.
Iimaanka iyo aaminaada
Dhammaan kuwa rumaysan Ciise Masiix way badbaadi doonaan (Falimaha Rasuullada 16,31). Laakiin maxay ka dhigan tahay in la rumeeyo Ciise Masiix? Xitaa Shayddaanka wuxuu rumeysan yahay in Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah. Ma jecla, laakiin wuxuu ogyahay inay run tahay. Intaa waxaa u dheer, Shaydaanku wuu ogyahay in Ilaah jiro oo uu abaalmariyo kuwa isaga doondoona (Cibraaniyada 11,6).
Marka waa maxay farqiga u dhexeeya waxa aan rumeysan nahay iyo waxa aan aaminsanahay Shaydaanka? Inbadan oo naga mid ah ayaa garanaya jawaab ka timid Yacquub: iimaanka runta ahi wuxuu ku muujiyaa ficilo (Yacquub 2,18-19). Waxaan qabanaa waxay ina tusaysaa waxaan runtii aaminsanahay. Dabeecaddu waxay caddeyn u noqon kartaa aaminaadda, in kastoo dadka qaarkiis u addeecaan sababao qaldan. Xitaa Shaydaanku wuxuu ku shaqeeyaa xayiraadaha Ilaah soo rogay.
Marka waa maxay aaminaadu sideese uga duwan tahay “inuu run xajisto”? Waxaan u maleynayaa sharraxa ugu fudud in badbaadinta iimaanka ay tahay aaminaad. Waxaan aaminsanahay Ilaah inuu ina daryeeli doono, oo uu wanaag ina sameeyo intii aan wanaagsanaanin, oo uu na siiyo nolosha weligeed ah. Aamminaadda macnaheedu waa ogaanshaha in Ilaah jiro, in uu wanaagsan yahay, in uu leeyahay awood uu ku qabto waxa uu doonayo, iyo aaminaadda uu u adeegsan doono awooddaas si uu u qabto waxa innaga ugu wanaagsan. Aaminaada macnaheedu waa rabitaan aan u soo gudbineyno oo diyaar u nahay inaan addeecno - cabsi ma'ahan ee waa jacayl. Haddii aan Ilaah aaminno, waynu jecel nahay isaga.
Aaminaadu waxay muujineysaa waxa aan sameyno. Laakiin camalku ma aha kalsooni mana abuuro kalsooni - waa fududaata natiijada kalsoonida. Asal ahaan, iimaanka dhabta ahi waa aaminaadda Ciise Masiix.
Hadiyad ka timid Ilaah
Aaway kalsoonida noocan ahi xaggee bay ka timid? Maahan wax aan nafteenna ka soo saari karno. Kama hadli karno nafteena ama uma adeegsan karno caqliga aadanaha si aan u dhisno kiis adag oo adag. Marna ma heli doonno waqti aan kula tacaalno dhammaan diidmada suurtagalka ah, dhammaan doodaha falsafadda ee ku saabsan Ilaah. Laakiin waxaa nagu qasbay inaan go'aan qaadno maalin walba: Ma Ilaahay baan aamini doonnaa mise ma aaminsanaan doonnaa? Isku dayga in go'aanka la galiyo gubashada dambe waa go'aan isaga laftiisa - weli ma aamminsanahay.
Masiixi kasta wuxuu qaatay go'aan hal mar ama mid kale inuu ku aamino Masiixa. Qaarna, waxay ahayd go'aan si wanaagsan looga fiirsaday. Dadka kale, waxay ahayd go'aan aan caqli gal ahayn oo loo sameeyay sababao qaldan - laakiin runtii waxay ahayd go'aan sax ah. Cidna kuma aamini karin qof kale, xitaa annaga lafteena. Isagoo keligiis ah ayaan nafteenna ku dhex burburin lahayn. Waan aamini kari weynay masuuliyiinta kale ee aadanaha. Qaarkeen, iimaanku wuxuu ahaa xulasho aan ka quusnay rajo la'aan - ma tagi karno meel kale oo aan ahayn Masiixa (Yooxanaa 6,68).
Waa caadi in aaminaadeena bilowga ahi ay noqoto aaminaad aan qaan gaarin - meel wanaagsan oo lagu bilaabo, laakiin maahan meel wanaagsan oo aan joogno. Waa inaan ku badinaa iimaankeenna. Sida nin ku yidhi Ciise:
Waxaan qabaa; caawin iimaankayga! » (Mark 9,24). Xertiisii ​​laftiisu waxoogaa shaki ah bay lahaayeen, xitaa markay caabudeen Ciise sarakiciddiisa (Matayos 28,17).
Marka xaggee laga rumeeyaa? Waa hadiyad ka timid xagga Eebbe. Efesos 2,8 wuxuu noo sheegayaa in badbaadadu ay tahay hadiyad ka timid xagga Ilaah, taasoo micnaheedu yahay in rumaysadka horseedda badbaadadu u noqdo hadiyad.
Waxaa nalooga sheegay Falimaha Rasuullada 15,9 in Eebbe qalbiyada rumaystayaasha ku nadiifiyey rumaysadka. Eebbe wuu dhex shaqeeyay. Isaga waa kan furay "albaabka iimaanka" (Falimaha Rasuullada 14,27). Ilaah wuxuu u sameeyay maxaa yeelay isagu waa kan awood inoo siiya rumaysiga.
Ma aaminsanaan lahayn Ilaah haddii uusan na siin awood aan ku aamino isaga. Dembigu wuxuu khalkhaliyay dadka inay rumeeyaan ama aaminaan Ilaah xoogtooda ama xigmaddooda. Taasina waa sababta rumaysadku aanu ahayn “shaqo” ina dhigaysa badbaadada. Ma aannaan helin caan sababta oo ah waxaan uqalnay - aaminaad ahaan micnaheedu waa helitaanka hadiyadda, ku mahadnaqa hadiyadda. Ilaah wuxuu ina siinayaa awood aan ku helno hadiyadda, kuna raaxeysanno hadiyadda.
Ilaah wuxuu leeyahay sabab wanaagsan oo uu inagu rumeeysto maxaa yeelay waxaa jira qof gebi ahaanba lagu kalsoonaan karo oo rumeynaya oo isaga badbaadin kara. Iimaanka uu ina siiyaana wuxuu salka ku hayaa wiilkiisa, oo isagu hilib u noqday badbaadadeenna. Waxaan haysannaa sabab wanaagsan oo aan aaminsanahay, maxaa yeelay waxaan haysannaa badbaadiye oo inoo soo iibsaday badbaadada. Wuxuu sameeyey wax kasta oo loo baahan yahay, mar iyo dhammaan, in la saxeexo, la shaabadeeyo oo la keeno. Rumaysadkeenu wuxuu leeyahay aasaas adag: Ciise Masiix.
Ciise waa bilowga iyo dhammaystirka iimaanka (Cibraaniyada 12,2), laakiin shaqadan kaligiis ma qabto. Ciise keliya wuxuu sameeyaa waxa Aabbuhu doonayo, oo wuxuu ku shaqeeyaa qalbiyadeenna xagga Ruuxa Quduuska ah. Ruuxa Quduuska ah ayaa ina baray, na xukumay oo na siiya iimaan (Yooxanaa 14,26; 15,26; 16,10).
Sidee buu Eebbe ina siiyaa? (Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah) Rumaysad? Waxay badanaa ku dhacdaa wacdiista. "Haddaba rumaysadku wuxuu ka yimaadaa wax wacdinta, laakiin wacdiyuhu wuxuu ka yimaadaa ereyga Masiixa" (Rooma 10,17). Wacdigu wuxuu ku jiraa erayga qoran ee Eebbe, Kitaabka Quduuska ah, wuxuuna ku jiraa ereyga Ilaah ee lagu hadlay, ha ahaato wacdi kaniisadda dhexdeeda ama marag furfuran oo qof kale loo sameeyo.
Ereyga injiilku wuxuu inoo sheegayaa Ciise, ereyga Ilaah, iyo Ruuxa Quduuska ah wuxuu adeegsadaa eraygan si uu noogu iftiimiyo oo si uun noo oggolaado inaan nafteenna u aaminno eraygan. Tan waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "maragga Ruuxa Quduuska ah," laakiin ma ahan marag markhaati ka ah maxkamadda oo aan wax ka weydiin karno su'aalaha.
Waxay aad ugu egtahay isbadal gudaha ah oo la badalay oo noo ogolaanaya inaan aqbalno warka wanaagsan ee lagu wacdiyo. Waxay dareemeysaa wanaag; in kastoo aan wali su’aalo qabno, waxaan aaminsanahay inaan ku noolaan karno farriintan. Waxaan ku dhisi karnaa nolosheenna, waxaan ku gaari karnaa go'aanno ku saleysan taas. Macno ayey leedahay. Waa doorashada ugu macquulsan. Ilaahay wuxuu ina siinayaa awood aan ku aamino. Waxa kale oo ay ina siisaa awood aan ku koraan iimaanka. Dhigashada iimaanka waa midho koray. Waxay awood siisaa oo awood u siisaa maskaxdeena iyo shucuurkeenna si ay u fahmaan injiilka badan iyo in ka badan. Wuxuu naga caawiyaa inaan aad iyo aad u sii fahanno oo ku saabsan Ilaah asaga oo nafsaddiisa noo siiya Ciise Masiix. Si aan u isticmaalno sawir Axdiga Hore ah, waxaan bilaabeynaa inaan Ilaah la soconno. Waxaan ku nool nahay isaga, waxaan ku fikirnaa isaga, waan rumeysanahay isaga.
Laakiin dadka Masiixiyiinta ah badidoodu waxay la dagaallamaan caqiidadooda mararka qaarkood. Koritaankayagu marwalba ma aha mid jilicsan oo joogto ah - wuxuu ku dhacaa imtixaannada iyo su'aalaha. Dadka qaarkiis, shaki ayaa ka dhasha masiibo ama xanuun daran. Dadka kale, waa barwaaqo ama waqtiyo wanaagsan oo si hoose iskuday u dejinaya waxyaalaha waxyaalaha Ilaah ka badan. Inbadan oo inaga mid ah waxay caqabadahayaga kala kulmi doonnaa labada noocba.
Dadka saboolka ah badanaa waxay leeyihiin iimaan ka badan kuwa taajiriinta ah. Dadka loo maro tijaabooyin joogto ah waxay ogyihiin in ka sokow Ilaah inaysan rajo lahayn, inay khiyaar kale lahayn oo aan ahayn inay isaga uun isku halleeyaan. Tirakoobyadu waxay muujinayaan in dadka saboolka ahi ay boqolkiiba boqol ka helaan dakhligooda kaniisadda marka loo eego dadka taajiriinta ah. Waxay umuuqataa in aaminaadooda (in kasta oo aysan kaamil ahayn) way isbadal badan tahay.
Cadowga ugu weyn ee iimaanka, waxay umuuqataa, markay wax walba si hagaagsan u socdaan. Dadku waxay isku dayaan inay rumaystaan ​​inay ku timid xoogga maskaxdooda inay wax badan qabteen. Waxay lumiyaan dhaqankooda carruurnimada si ay ugu tiirsanaadaan Ilaah. Waxay ku tiirsan yihiin waxay leeyihiin halkii Eebbe ka yimid.
Dadka saboolka ah waxay ku sugan yihiin xaalad wanaagsan si ay u bartaan in nolosha adduunkan ay ka buuxaan su’aalo iyo in Ilaah ugu yar yahay su’aal. Way ku kalsoonaadaan maxaa yeelay waxkastoo kale waxay cadeeyeen inaan lagu kalsoonaan karin. Lacag, caafimaad iyo asxaab - dhamaantood waa kuwo dabacsan. Annagu kuma kalsoonaan karno.
Adigu waad ku kalsoonaan kartaa oo keliya Ilaah, laakiin xitaa haddii taasi ay tahay kiiska, had iyo goor ma hayno caddeyn aan jeclaan lahayn inaan haysanno. Marka waa inaan aaminnaa. Sidii Ayuub yiri: Xitaa haddii uu i dilo, waxaan rabaa inaan ku kalsoonaado (Job 13,15). Kaliya wuxuu bixiyaa rajo nolosha weligeed ah. Kaliya wuxuu bixiyaa rajo ah in noloshu macno sameyso ama ujeedo leedahay.
Qayb ka mid ah koritaanka
Si kastaba ha noqotee, waxaan mararka qaar ula dagaalannaa shaki. Waa qayb keliya oo ka mid ah hannaanka lagu koriyo iimaanka iyadoo la baranayo in nolosha Ilaah lagu kalsoonaado. Waxaan aragnaa xulashooyinka hor yaal, oo mar labaad waxaan u doorannaa Ilaah xalka ugu wanaagsan.
Sida Blaise Pascal yiri boqolaal sano kahor, xitaa hadaan u aamino sabab kale, uguyaab waa inaan aamino maxaa yeelay Ilaah waa sharadka ugufiican. Haddii aan raacno oo uusan isagu jirin, markaa waxba ma lumine. Laakiin haddii aanaan isaga raacin oo uu isagu jiro, wax kasta ayaa luntay. Marka ma haysanno wax aan lumino laakiin wax walba oo aan helno haddii aan rumeysanno Ilaah annagoo ku nool oo aan u maleyneyno inuu yahay xaqiiqada ugu macquulsan adduunka.
Taasi micnaheedu maahan inaan wax walba fahmi doonno. Maya, waligeen waligeen fahmi mayno. In la rumaystaa waa in lagu kalsoonaado Ilaah, xitaa haddii aanan had iyo goor wax fahmin. Waan caabud karnaa xitaa haddii aan shaki qabno (Matayos 28,17). Badbaadadu maahan tartan sirdoon. Iimaanka ina badbaadiya kama yimaado doodaha falsafadda oo jawaab u leh shaki kasta. Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa xagga Ilaah. Haddii aan ku tiirsanaano ogaanshaha jawaabta su’aal kasta, kuma tiirineynin Eebbe.
Sababta kaliya ee aan ugu dhex jiri karno boqortooyada Ilaah waa nimco, iimaanka Badbaadiyeheenna Ciise Masiix. Markii aan ku tiirsanaano addeecistayada, waxaan ku tiirsannahay wax qaldan, wax aan lagu kalsoonaan karin. Waa inaan wax ka bedelnaa iimaankeenna xagga Masiixa ah (U oggolow Ilaahay inuu toosiyo iimaankeenna) iyo isaga keligiis. Sharciyada, xitaa shuruucda wanaagsan, ma noqon karaan asaaska badbaadadeenna. Addeecidda xitaa amarradii Axdiga Cusub ma noqon karaan isha amnigeenna. Kaliya Masiixu waa aamin.
Markii aan ku korayno qaan gaadhnimada ruuxiga ah, waxaan had iyo jeer ka warqabnaa dembiyadayada iyo dembiyadayada. Waxaan ogsoonahay sida aan uga fog nahay Ilaah, taasina waxay sidoo kale naga dhigi kartaa shaki in Ilaah runtii u soo diri doono Wiilkiisa si uu ugu dhinto dadka sida musuqmaasuq ah oo aan annaguba nahay.
Shakiga, si kasta oo ay u weyn tahayba, wuxuu dib noogu celin karaa iimaanka weyn ee Masiixa, maxaa yeelay isaga xaggiisa keliya ayaan fursad ku wada haysannaa. Ma jiro meel kale oo loo leexiyo. Erayadiisa iyo ficilladiisa, waxaan ku aragnaa inuu si sax ah u yaqaanay sidaan u musuqmaasuqnay ka hor intuusan u dhiman dambiyadeenna. Sida ugufiican ee aan nafteena u aragno, waxaan sii arkeynaa baahida loo qabo in loo dhiibo nimcada Ilaah. Kaliya isaga wuu kufiican yahay inuu inaga badbaadiyo nafteenna, isaguna wuxuu inaga xorayn doonaa shakikeenna.
Waa aaminaada ah in aan xiriir wanaagsan la leennahay Ilaah. Waa aaminsanaanta inaan tukanno, rumeysanno inaan caabudno, rumeysanno inaan ereyadiisa ku maqalno wacdinta iyo bulshada dhexdeeda. Rumaysadku waxay ina caawisaa inaan kaqaybqaadashada wadaagida Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Rumaysad ayaynu ku sheegi karnaa daacadnimadeenna Ilaah, xagga Badbaadiyeheenna Ciise Masiix, xagga Ruuxa Quduuska ah ee ka shaqeeya qalbiyadeenna.
Waa aaminaada ah inaan dadka kale jecel nahay. Iimaanku wuxuu naga xoreeyaa cabsida laga qabo cayda iyo diidmada. Waan jeclaan karnaa dadka kale anagoon ka walwalayn waxa ay nagu sameyn doonaan maxaa yeelay waxaan aaminsanahay Masiixa inuu si deeqsinimo leh noogu abaalmariyo. Iimaanka Ilaahay waxaan ku badin karnaa kuwa kale.
Rumaysadka Ilaah waxaan ku dhejin karnaa noloshayada koowaad. Haddii aan aaminsanahay in Ilaah yahay sida ugu wanaagsan ee isagu yiri, waan isaga ku qiimeyn doonnaa waxkasta oo kale waxaanan diyaar u noqon doonnaa allabaryada uu naga doonayo. Waan ku kalsoonaan doonnaa, aaminaaddeena ayaa ah inaan la kulmi doonno farxadda badbaadada. Nolosha masiixiga waa arin ku kalsoon Ilaah ilaa bilow ilaa dhamaad.